Waxbarashada Minnesota ee Jiilka Soo Socda
Markii Sambath "Sam" Ouk iyo qoyskiisa ay ka baxsadeen meelihii dilka ahaa ee Cambodia oo ay yimaadeen Rochester, Minnesota, bilowgii 1980-yadii, waxay qayb ka ahaayeen mowqifka ugu horreeya ee qaxootiga Koonfur-bari ee Asia si ay dib ugu dajiyaan gobolka.
Sanadihii hore ee Minnesota, Ouk wuxuu kufududay inuu ogaado halka uu ku habboon yahay inta u dhaxaysa laba dhaqan oo kala duwan. Guriga ayuu Khmer la hadlay qoyskiisa, laakiin markii uu ka soo baxay albaabkiisa hore, wuxuu isku dayay in uu adduunka aan la aqoon.
"Waxaan ahaa ilmo yar oo aan qaran ahayn," ayuu yidhi. "Dhibaatada ka jirta in meel la iska leeyahay ayaa qayb weyn ka ciyaaray nolosha naftayda, adeerkay, anigeyga, iyo asxaabtayada si wadajir ah u koraya bulshada qaxootiga ah."
"Macallimiintayda ayaa i gacan siiyey. Kaligey ma ahayn sida aan u socdo labada caalam ee qibrada qaxootiga iyo Maraykanka. " -SAM OUK, KORONTADA WAXBARASHADA SOMALI, DUGSIYADA DADWEYNAHA EE FARIBAULT
Iskuulku wuxuu ka caawiyay yareynta diiqada. Wuxuu baranayey sida luuqadda Ingiriisiga u barto oo uu dareemo inuu dareemayo inuu ka tirsan yahay meel. "Haddii aan marnaba bartay ereyada ama aan helay codkayga, Maraykanku wuxuu dareemay uun sidii xerada qaxootiga kale," ayuu yidhi. "Nasiib wanaag aniga ahaan, fasalada Ingiriisiga ah ee Luqad Labaad (ESL) ayaa i baray ereyada, aniguna codkaygaygana wuu heley."
Macallimiintiisa ayaa ku dhiirrigeliyay inuu wax ka barto dhaqanka Cambodian iyo in uu la wadaago asxaabtiisii Ingiriisiga ku hadla. "Macallimiintayda ayaa i gacan geliyay," ayuu yidhi. "Xitaa ka dib markii aan ka soo baxay barnaamijka, waxaan ku laaban lahaa macalimiinteyda ESL-ka waxayna bixiyeen tilmaamo xoogan aniga. Kaligey ma ahayn sida aan u socdo labada caalam ee qibrada qaxootiga iyo Maraykanka. "
Sam Ouk, Isku-duwaha Luqadda Ingiriisiga ee Dugsiyada Faribault, wuxuu la shaqeeyaa arday.
Caqabadda Cusub, Fursadda Cusub
Maanta, waxaa jira hareeraha 230,000 carruurta da'da dugsiga ah laga soo bilaabo qoysaska soo galootiga ah ee Minnesota - taasi waa korodh 60% taniyo 2000.
Qaar ka mid ah carruurtan, sida Sam Ouk, ayaa u yimid Maraykanka da 'yar, laakiin dad badan ayaa halkan ku dhashay. Wadar ahaan, waxay ku hadlaan ku dhowaad 200 luqadood oo waxay geli karaan dugsi leh diyaar garow waxbarasho oo ballaaran. Qaar waa carruur laba luqoodle ah oo leh waalidiin aqoon sare leh halka kuwa kale ay yimaadaan Minnesota iyaga oo aan lahayn waxbarasho rasmi ah oo ay ku hadlaan luqadooda hooyo.
Muhaajiriinta waxay ku daraan qiimo weyn oo ku aaddan horumarka bulshadeed, dhaqanka iyo dhaqaalaha gobolka. Waxay bixiyaan wax ka badan $ 1 bilyan oo canshuur dawlad goboleed iyo kuwo maxaliga ah waxayna ku biiraan ku dhawaad 9 bilyan oo doolar dhaqaalaha gobolka.
Carruurtoodu waa jiilka xiga ee hogaamiyaasha Minnesota iyo muwaadiniinta. Shaqaalaynta budhcad-badeeddu waxay noqonaysaa mid aad muhiim u ah iyadoo niyadjabayaashu ay rajaynayaan korodh aad u badan oo ah tirada boomerayaasha ee ka fariistay.
Sidee u diyaargaroobeen caruurteena inay hogaamiyaan berito barashada sida wanaagsan ee aan maanta u bareyno.
"Waa caqabadda ugu cusleysaa nidaamyada dugsiga, sidoo kale waa fursad cusub oo lagu xoojinayo Minnesota," ayuu yiri Delia Pompa, oo ah sarkaal sare oo siyaasadda waxbarashada ah Machadka Siyaasadda Socdaalka. "Dhammaantood waxay ka bilaabmaan dugsiyada. Haddii aynaan si fiican u qabin, ugu dambeyntii waxay saamayn doontaa sida dowladdu guud ahaan u socoto. "
Kor u Qaadista Codadka Waalidiinta, Barayaasha iyo Ururada Bulshada
Isaga oo ka helay khibrad dugsi dadweyne, Ouk wuxuu ku hawlan yahay waxbarashada yar ee kuleejka ka hor inta uusan helin shahaadadiisa waxbarashadiisa iyo shahaadada mastarka ee ESL.
"Waxaan xaqiijineynaa codka dadka ay saameyn ku leeyihiin siyaasadaha." -BO BARNAAMIJKA UGU HOREEYEY, KA SOO JEEDIYEY SIYAASADAHA AMA SOOMAALIYA
Maanta wuxuu u shaqeeyaa isku-duwaha barashada Ingiriisiga ee Dugsiyada Faribault. Sanadkii la soo dhaafay, wuxuu la shaqeynayey Isbahaysiga hogaamiyayaasha Asian Aasiya (CAAL) dadaal ay maalgeliso Hay'adda McKnight Foundation Barnaamijka Waxbarashada iyo Waxbarashada si loo hubiyo in dhammaan carruurta ku hadla luqado kala duwan iyo sidoo kale uu ahaa. Si taas loo sameeyo, CAAL waxay ku hawlan tahay waalidiinta, barayaasha iyo ururrada bulshada inay kugula taliyaan isbeddelada ka caawin doona Waaxda Waxbarashada ee Minnesota inay si wacan u aqoonsadaan oo ay daboolaan baahida carruurta u baahan adeega luqadda. "Waxa aan sameyneyno waa in aan ka faa'iideysano fursadda," ayuu yiri Bo Thao-Urabe, Agaasimaha Shabakada CALA. "Waxaan xaqiijineynaa codka dadka ay saameyn ku leeyihiin siyaasadaha."
Aragtida CAAL-ga waxay timaaddaa waqti muhiim ah marka Minnesota ay horumariso qorshaheeda si ay u buuxiso shuruudaha Horumarinta Arday kasta ee Arday kasta oo ku guuleysta (ESSA) ka hor inta uusan dhaqan galin sanadka 2017-18. ESSA, oo badalaysa sharciga No Child Left Behind Act, ayaa go'aamiya sida xukuumadda federaalku u qabato xisaabtamaan si loo xoojiyo guulaha waxbarasho ee dhamaan dugsiyada, gaar ahaan dugsiyada saboolka saboolka ah. Marka ugu horeysa, miisaan culus ayaa lagu xirayaa sida dugsiyadu u horumariyaan aqoonta luqadda Ingiriisiga ee ardayda aan ahayn kuwa ku hadla afkooda.
"Ujeeddo mid ah ayaa ah in la hubiyo in nidaamka waxbarashu uu yahay mid hufan. Waxaan rabnaa in waalidiinta ay fahmaan nidaamka si fiican ugu doodi karaan carruurtooda. " -HAYING YANG, COALITION OF SOMALILAND AMA BADAN
Si loo hubiyo in waalidiinta iyo barayaashu ay ogaadaan sida ESSA u kobcaan, hoggaamiyeyaasha beeleedyada ayaa sharaxaad ka bixiyay isbedelka ESSA ku saabsan TV-yada Hmong iyo Spanish iyo raadiyaha. CAAL iyo Iskaashiga Sinnaanta ee Minnesota Waxa kale oo ay fududeeyeen shirarka waalidiinta oo ay wadaagaan daneeyayaasha, oo ay ka mid yihiin macalimiinta, maamulayaasha dugsiyada, cilmi-baarayaasha jaamacadaha, waalidiinta, iyo u doodayaasha ka soo jeeda beelaha kala duwan. "Ujeedada ayaa ah in la hubiyo in nidaamka waxbarashu uu yahay mid hufan," ayuu yiri KaYing Yang, oo ah agaasimaha siyaasadda ee CAAL. "Waxaan rabnaa in waalidiinta ay si fiican u fahmaan habka nidaamka ku filan oo loogu doodayo caruurtooda."
Xubno ka mid ah Isbahaysiga Hogaamiyayaasha Aasiya Ameerika waxay kulmaan si ay ugala hadlaan u-qareemeynta waxbarashada iyo ka-qaybgalka shaqada ee fadhigan Minnesota Multilingual Equity Network oo lala yeesho waalidiinta.
Tani waxa kale oo ka mid ah in lala xiriiro bulshooyinka ku hadla luqado badan oo ka baxsan Minneapolis-St. Aagga Booska Booska. Caawinta CAAL-ta, Ouk wuxuu qoysaska, macallimiinta, sharci-dajiyeyaasha, iyo hoggaamiyeyaasha beelaha wada geeyaa si ay uga wada hadlaan arrimaha. "Halkii aan ugu yeedhi lahaa hal ama laba qof oo naga mid ah si aan u tagno magaalooyinka Twin Cities, waxaan u keenay magaalooyinka Twin Cities si aan u muujinno waxa aan qabanayno," ayuu yidhi Ouk.
Dadaallada sidan oo kale waxay siinayaan siyaasad dejiyeyaasha daaqada khibradaha nolosha dhabta ah ee ardayda iyo qoysaska, kuwaas oo ay u baahan yihiin inay si fiican u fahmaan iyagoo isku dayaya inay wax ka qabtaan hawsha degdegga ah ee wax ka barata tirada sii kordhaysa ee carruurta ka soo jeeda qoysaska qaxootiga ama qaxootiga.
"Qibrada qaxootigu way dhammaataa marka qaxootigu helo meel ay mar labaad ugu wacan karaan guriga," ayuu yidhi Ouk. Qaxootiga Cambodian, dugsigu wuxuu ahaa meeshii uu ka baranayey Ingiriisi, iyo in ka sii muhiimsan, waa meesha uu ka helay cod. Taasna waa hadiyad ah Ouk iyo barayaasha kale waxay rajeynayaan inay u gudbaan jiilka xiga ee ardayda.